Professional Sea Water Desalination Generator Nịm Manufacturer na Factory Kpọmkwem | Gị dị ka
Osimiri Water Desalination Generator Set
Ngwaọrụ a na - eji otu mgbake pụrụ iche ewebata ọkụ site na mmiri jụrụ oyi na mmiri na - ekpochapu anwụrụ, mgbe ahụ gaa na silencer, na n'ikpeazụ, mmiri gbanwere ọzọ. Jiri ekpokọtara okpomọkụ ikusi mmiri oké osimiri na odide n'ime ọhụrụ mmiri site a multi-ogbo flash draya. Mmiri enwetara na mmiri dị oke mkpa achọghị ụdị akpụkpọ anụ osmosis na ike eletriki.
Super Silent Sea Water Desalination Genset (Nke bu ugwu)
Mmanụ nwere ike: Gas nkịtị, gas Coalmine, ikuku nnu.
Nwere ike System insurea ikpokọta ọkọnọ usoro pụrụ ịdabere.
Ngụkọta itinye n'ọrụ nke usoro mgbake ọkụ rute 90%.
Akpaka akara kabinet (mmekọrịta, ibu nkesa)
Generators na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe na-akpaghị aka.
Safety nchedo, super nkịtị imewe.
Mara: Multistage jikọtara ọkọnọ usoro nwere ike ịhọrọ site na-eso ngwaọrụ.
Okwu Mmalite - ntinye igwe na-ewepu oku nke nwere ike imetuta mmiri mmiri.
:Kpụrụ: ngwaọrụ ahụ na-eji ngwa mgbake pụrụ iche iji kpoo ọkụ site na mmiri jụrụ oyi na mmiri na-ekpochapu anwụrụ, mgbe ahụ, na-agbachi nkịtị, na n'ikpeazụ ka mmiri gbanye ọkụ. Jiri ekpokọtara okpomọkụ ikusi mmiri oké osimiri na odide n'ime ọhụrụ mmiri site a multi-ogbo flash draya. Mmiri enwetara na mmiri dị oke mkpa achọghị ụdị akpụkpọ anụ osmosis na ike eletriki.
Anyị Project: Mmiri na ọkụ eletrik ngalaba-mmepụta
Mmekota nke mmiri a na-arutu aka bu oru na ntinye aka nke mmiri mmiri na eletrik.
Ebe ọ bụ na ọnụ mmiri nnu mmiri na-adabere na ọnụ ahịa ọkụ eletrik na oriri uzu ọkụ ruo n'ọtụtụ dị ukwuu, ndị na-arụ ọrụ hydropower nwere ike iji uzuoku na ọkụ eletrik nke ụlọ ọrụ ike wee nye ike maka ịkọ mmiri nke mmiri mmiri, ka ị wee nwee ike iji ike rụọ ọrụ na belata ọnụ mmiri nnu nnu nke mmiri. A na-ewu ọtụtụ osisi iminyere ihe n'akụkụ osisi ike, bụ isi ihe owuwu ihe owuwu maka nnukwu ọrụ imepụta nnu.
N'ime usoro ịmị ọkụ eletrik, ihe na-emepụta ọkụ na-ere ọkụ n'ime ụlọ ga-ewepụta oke ọkụ n'ihi gas na-ekpochapu si n'ọkụ na esemokwu nke mmegharị na-akpata. Ọbụghị naanị na anaghị eji ọkụ a eme ihe, kamakwa ọ chọrọ ọnwụ nke ike bara uru na injin combustion dị n'ime iji mee ka obi jụrụ (dị ka ndị na-akwado ike na generator fans fans). Usoro obi jụrụ nke injin na-ebugharị n'ime ya na-ejikarị ụzọ abụọ, otu bụ ikuku ikuku na nke ọzọ bụ mmiri jụrụ oyi. Typesdị obi jụrụ abụọ na-efunahụ ike ma gbakwunye na ọkụ ọkụ. Ke ofụri ofụri, maka mma jụrụ mmetụta na ogologo ọrụ oge, ọtụtụ generators iji mmiri jụrụ usoro.
Ebumnuche anyị mepụtara na ụkọ nke usoro ntinye ọkụ nke dị n'ime, ma na-enye ihe ntinye ọkụ nke na-eme ka mmiri dị jụụ nke nwere ike iji mmiri mmiri mee ka ọkụ ọkụ ọkụ dị n'ime ya wee mee ka mmiri dị ọcha site na evaporation, iji nweta nzube nke nchekwa ume na gburugburu ebe obibi. nchedo.
Ihe mepụtara abụghị naanị ịchọ ike ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ na igwe na-enye ọkụ, belata nsị nke dị n'ime na-ewepụta ike oriri jụrụ, meziwanye ike dị mma nke mmanụ diesel na-arụ, yana ọkụ na gas na-ekpo ọkụ na -emepụta ọkụ eletrik, ma na-amụba setịpụrụ onwe ya ịrụ ọrụ ọrụ na-agba mbọ iji okpomoku nke esemokwu na-eme, iji mmanụ dizel na-ewepụta ihe mkpofu ikpo ọkụ iji kpoo mmiri, n'otu aka igwe na-ekpochapụ igwe, n'aka nke ọzọ iji nweta mmiri kpochara na mmiri nnu nnu , ọrụ, Ọ kacha mma maka agwaetiti, ụgbọ mmiri na ebe ndị ọzọ mmiri dị ụkọ.
Nke gara aga: 15kva-500kva Open / Silent Nature Gas Generator Setịpụrụ
Osote: Ikpokọta Jụrụ, Heating na Power System Generator
Nlereanya IKE MMETOLTA AJRE AHASE Imeputa CAPACOTY Ike mmiri mmiri
KW / KVA V HZ KW / H L / PER HOUR
China mgbapụta mmiri
Moveable ọkụ ụlọ elu mmanụ dizel jikọtara
Ikpokọta Jụrụ, Heating na Power System Generator